Iiwayini ukuchitha isiqhwithi esiqhingini sentlango kunye noRichard Branson - Senziwe eSpain
Iiwayini ukuchitha isiqhwithi kwisiqithi sentlango kunye noRichard Branson
Kuthunyelwe Kwi 9 Januwari, 2019 16 Februwari, 2019 By HB
Necker Island ligama isiqithi labucala Billionaire lukhuni Richard Branson, ibekwe i Virgin Islands, apho oku kwenzeka yokugqibela ngoLwesithathu Irma Hurricane ukutshabalalisa yonke into esendleleni ayo. Irma kufuneka kuqatshelwe ukuba inkanyamba kwi 5 5 udidi, yenye yezona arhente wokutshabalalisa kwindalo, ngokufanelekileyo ngokuba oko "ngomnwe kaThixo" Classic umboniso ka 90, Twistter.
Phakathi kwezinye izinto, uRichard Branson unendawo yangaphantsi komhlaba apho wagqiba kwelokuba aphephe u-Irma adlule lakhe iqela. Yena ngokwakhe uvakalise ukuba izakhiwo aziphethe kwisiqithi sakhe zilungele ukumelana nemimiselo yomda, nangona kukho izinto ezimbalwa ezinokumelana nekhefu le-5, ngoko bekungenakuqinisekiswa nantoni na.
Kodwa inyaniso kukuba i-winery yanyamezela, kodwa ayiyiyo yonke indawo yesiqithi, eyachithwa. Emva kokugqithisa isiqhwithi, uBranson wathi: "Siphephe kwiqhwithi elinamandla kunayo yonke inxalenye ye-winery, kwaye, ngenhlanhla, yahlala iqinile. Iingcamango zethu zikunye nalabo bachaphazelekayo le ntlekele kuzo zonke iingqungquthela zaseVirgin Islands, kwiiCaribbean nangaphezulu "
Ngaphambi kwesiqhwithi, uBranson wabiza ukuba njengoko yena kunye neqela lakhe beza kubaleka kwindawo yokugcina, amathuba kukuba kwakuya kubakho iibhotile ezingaphantsi xa zingena. Kwaye kuqhelekile, i wayini Kunokuba liqabane enkulu ngamaxesha embandezelo Usigcine abantu abaninzi. Ayikho indlela engcono yokuchitha ixesha apho iqhinga elona lifanelekileyo kukukhusela okwenzeka ngaphandle ngaphandle kwebhotile yewayini, kwaye, ukwazi ukuba ngubani esilayeniNgokuqinisekileyo bebengayi kuba yiwayini.
I-Necker kunye nommandla wonke uphathwe ngokupheleleyo. Iingcamango zabantu bonke abachaphazelekayo yiNqantyambo #Irma. Ndiyabulela inkxaso https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK
- URichard Branson (@richardbranson) 7 Septemba ye-2017
Uhambo oluhamba La Rioja, I Ribera del Duero, Bordeaux, Entre Deux Meres okanye iLa Toscana, kunye nentloko yayo ijolise ekunandeleni i-aromas nganye kunye neepropati zezinye iwayini ezilungileyo kakhulu kwihlabathi ... Phanda, funda kwaye ufumene iindlela zobugcisa abazisetyenziswa kwimveliso yabo, isimo sezulu le ndawo ngethuba lonyaka lokuvuna, iwayini wachitha ixesha ebambe de sivula ngexesha inkanyamba, nabo bonke abo ezifihlakeleyo emva nemvaba yewayini.
Ndabona nje ubusuku bokukhala nomoya kunye neNqhwithi #Irma Iingqonge zisondele ngakumbi - wonke umntu ozolile kunye nophuculo https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/lbM0bdHxCv
- URichard Branson (@richardbranson) 6 Septemba ye-2017
Kwaye ukuba ezi diliya zihamba nazo ieshizi o Ham yaseIberiya, unokujika ixesha lokubandezeleka ekunandiseni. Kwaye konke kusemandleni ethu, sinokuzinikezela ukwesaba size sihlale ubusuku besikhukhula, sivule amehlo ethu kwaye sithandaza, okanye siyakwazi ukuguqula imeko kwaye siyisebenzise. Siyaqiniseka ukuba uSir Richard Richard kunye neqela lakhe benza ukuba baninzi bahlale kwi-winery babonga ngo-Irma.
Ukulindela amandla opheleleyo weNqantyambo #Irma malunga neeyure ze-4, siya kubuyela kwikherini yewayini ekhonkco phantsi kwendlu https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v
ephawulweyo: Bodega/ngqutyana/Iziqithi zaseVirgin/URichard Branson/Iwayini
ngeposi Previous: Bodegas Navarro López
elilandelayo: Bodegas Pradorey, abakhethiweyo baseRibera del Duero